Chart types | myanmarexcelexpert
Excel Chart Types and their Uses
Chart with Logarithm Scale
Chart With Subcategories
Combination Two Axis with Two Different Value Scale
Chart with3Axis
Char with Right to Left Axis
Customizing Column Chart
Chart Types and Uses
Excel မှာ အသုံးများတဲ့ Chart type တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Category တစ်ခု (သို့မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ Data တွေကို နှိူ င်း ယှဉ်တဲ့အခါ အသုံးများပါတယ်။ အချိန်ကာလအလိုက် တန်ဖိုး အပြောင်းအလဲ တွေ နှိူင်းယှဉ်ကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာလဲ အသုံးများပါတယ်။ ဒေတာတန်ဖိုးတွေကို Vertical အလိုက် ဖော်ပြပြီး၊ Category (သို့မဟုတ်)အချိန်ကာလတွေ ကိုတော့ အလျားလိုက်ဖော်ပြပါတယ်။
Line Chart ကိုလဲ Excel မှာ အသုံးများပါတယ်။ အချိန်ကာလအလိုက် တန်ဖိုး ပြောင်းလဲမှူ ပုံစံ ကို ဖော်ပြချင်တဲ့အခါမျိူးတွေမှာ အသုံး များပါတယ်။ တန်ဖိုးတွေကို Vertical ဖော်ပြပြီး Category (သို့မဟုတ်) အချိန် ကိုတော့ Horizontal ဖော်ပြပါတယ်။
Pie Chart ကို Data Serieis တစ်ခုတည်းအတွက်အသုံးများပါတယ်။ တန်ဖိုးတစ်ခုချင်းစီက Data Seires တစ်ခုလုံးအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဆက်စပ်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြချင်တဲ့အခါ အသုံးများပါတယ်၊
Data Series ထဲက ကိုယ် အလေးပေး ဖော်ပြချင်တဲ့ Data တစ်ခုတည်းကို ဆွဲထုတ် ဖော်ပြချင်ရင် Exploded types တွေကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Pip of Pie ၊ Bar of Pie တို့ကိုလဲ လိုအပ်သလို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Bar Chart က Column Chart နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ တန်ဖိုးတွေကို Column Chart မှာ Vertical ဖော်ပြပြီး Bar Chart မှာတော့ Horizontal ဖော်ပြ တာပဲ ကွာတာပါ၊ Bar Chart မှာလဲ cylinder, cone, and pyramid subtype စသဖြင့် နှစ်သက်တဲ့ ပုံစံရွေးချယ် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Area Chart က Line Chart နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှူ ပုံစံ Trend ကို အလေးပေး ဖော်ပြချင်တဲ့အခါ Line Chart ကို သုံးပြီး တန်ဖိုး ပြောင်းလဲမှူ ပမာဏ Volume ကို အလေးပေးဖော်ပြချင်တဲ့အခါ Area Chart ကို အသုံးများပါတယ်။
6. XY (Scatter Chart)
XY (Scatter Chart ) ကို တန်ဖိုးနှစ်ခုရဲ့ ဆက်စပ်မှူ Correlation ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ XY chart မှာ Vertical ကော ၊ Horizontal ကော က တန်ဖိုး Value တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Categories မပါဝင်ပါဘူး။
7. Doughnut Chart
Doughnut chart က Pie Chart နဲ့ သဘောချင်း တူပါတယ်။ Pie Chart က Data Seiries တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲ အဆင်ပြေပေမယ့် Doughnut Chart ကတော့ Data Series အများကြီး ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။
8. Bubble Chart
Bubble Chart က တန်ဖိုးသုံးခုကို ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ XY Chart နဲ့ Area Chart ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဖော်ပြပေးပါတယ်။
ပထမ Column မှာရှိတဲ့ ဒေတာတွေကို Horizontal ဖော်ပြပေးတယ်
ဒုတိယ Column မှာရှိတဲ့ ဒေတာတွေကို Vertical ဖော်ပြပေးတယ်
Chart ထဲက Bubble ရဲ့ size က တတိယ Column မှာ ရှိတဲ့ Data ပမာဏကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
9. Surface Chart
Surface Chart ကို Dimension နှစ်ခု အသုံးပြု ပြီး Data တွေကို Surface အနေနဲ့ ဖော်ပြချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ အနည်းဆုံး Data Series နှစ်ခု ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
10. Stock Chart
Business မှာ အသုံးပြုဖို့ သီးသန့် Chart type ဖြစ်ပါတယ်။ Stock Chart ကို အသုံးပြုဖို့ Format သီးသန့်နဲ့ Data တွေ ထည့် ရပါတယ်။ Stock Chart အကြောင်း သီးသန့် ပို့စ်နဲ့ ထပ်ရှင်းပါမယ်။
11. Radar Chart
Radar Chart ကို အလယ်က Centre point တန်ဖိုးကနေ ဒေတာအမျိူးအစားအသီးသီးရဲ့ တန်ဖိုး ပြောင်းလဲမှူ တွေကို ယှဉ်ပြီးဖော်ပြချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။